China Elungiselelweyo Steel Formwork mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Ifom yeSinyithi yangokwezifiso
I-formwork yentsimbi yenziwe ngeplani yobuso yentsimbi eneembambo ezakhelweyo kunye neeflange kwiimodyuli eziqhelekileyo. Flanges ziye ngenqindi imingxunya ngamathuba athile indibano uqinisa.
I-formwork yentsimbi yomelele kwaye yomelele, ngenxa yoko inokuphinda isetyenziswe amaxesha ngamaxesha kulwakhiwo. Kulula ukuhlangana kunye nokuma nkqo. Ngobume obumiselweyo kunye nolwakhiwo, kufanelekile kakhulu ukufaka isicelo kulwakhiwo ekufuneka ubuninzi besakhiwo esime ngendlela efanayo, umz. Isakhiwo esiphakamileyo, indlela, ibhulorho njl.
Ifomati yentsimbi yesiqhelo yenziwe ngeplate yobuso yentsimbi eneembambo ezakhelweyo kunye neeflange kwiimodyuli eziqhelekileyo. Flanges ziye ngenqindi imingxunya ngamathuba athile indibano uqinisa.
I-formwork yesinyithi esomeleleyo yomelele kwaye yomelele, ke ngoko inokuphinda isetyenziswe amaxesha amaninzi kulwakhiwo. Kulula ukuhlangana kunye nokuma nkqo. Ngobume obumiselweyo kunye nolwakhiwo, kufanelekile kakhulu ukufaka isicelo kulwakhiwo ekufuneka ubuninzi besakhiwo esime ngendlela efanayo, umz. Isakhiwo esiphakamileyo, indlela, ibhulorho njl.
Formwork sentsimbi Custom ungenziwa ngemfuneko ngexesha ngokweemfuno zabathengi.
Ngenxa amandla aphezulu formwork sentsimbi, siko formwork sentsimbi babe reusability eliphezulu.
Ifomu yentsimbi inokugcina iindleko kwaye izise izibonelelo zokusingqongileyo kwinkqubo yokwakha.
Ukwenza ifomwork yentsimbi kufuna inkqubo encinci yemveliso. Zininzi iindlela zokwenza intsimbi, enye yazo kukumodela ngekhompyuter. Inkqubo yokumodareyitha yedijithali iqinisekisa ukuba isinyithi senziwe ngokuchanekileyo okokuqala xa senziwa kwaye senziwa, ngaloo ndlela sinciphisa isidingo sokwenza kwakhona. Ukuba ifomwork yentsimbi inokwenziwa ngokukhawuleza, isantya somsebenzi wasentsimini siya kukhawuleziswa.
Ngenxa yamandla ayo, intsimbi ilungele imeko ezibi kakhulu kunye neemeko zemozulu ezibi. Ukusebenza kwayo ngokuchasene nokumelana kunciphisa ukubakho kweengozi zokwakha kunye nabahlali, ngaloo ndlela zibonelela ngendawo ekhuselekileyo kuye wonke umntu.
Ukujonga ukuphinda kusebenze kwakhona kunye nokuvuselelwa kwesinyithi, kunokuthathwa njengezinto ezizinzileyo zokwakha. Ke ngoko, ngakumbi nangakumbi iinkampani zenza ukhetho oluzinzileyo lokuphucula ukunciphisa ukonakaliswa kwendalo.
Iifomwork sisiseko sethutyana apho ikhonkrithi inokugalelwa khona kwaye ikhuseleke ngelixa ihleli. I-formwork yentsimbi ineepleyiti zentsimbi ezinkulu ezikhuselweyo kunye nemivalo kunye nezibini ezaziwa ngokuba zezobuxoki.
U-Lianggong unabathengi abaninzi kwihlabathi liphela, sinikezele ngenkqubo yethu yefomathi kuMbindi-mpuma, eMzantsi-mpuma weAsia, iYurophu njl.
Abathengi bethu bahlala bethembele kuLianggong kwaye basebenzisana nathi ukufuna uphuhliso oluqhelekileyo.
* Akukho ukuhlangana, ukusebenza ngokulula kwifom form.
* Ukuqina okuphezulu, yenza imilo efanelekileyo kwikhonkrithi.
* Ngokuphindaphindiweyo ingeniso iyafumaneka.
* Uluhlu olusetyenziswa ngokubanzi, njengokwakha, ibhulorho, itonela, njl.
Iindonga ze-shear, i-metros, i-slabs, iikholamu, izakhiwo zokuhlala kunye nezorhwebo.
Egqithileyo Plastic ekubhalwe Formwork
Okulandelayo: IFomwork yokunyuka kweCantilever
Ifom yeKholamu yoDonga